Miomana amin’ny faha 150 taonan’ny finoana ireo vaomieran’ny serasera !
Taona miavaka ho an’ny diosezin’i Fianarantsoa ity 2021 ity. Hankalazaina ny faha 150 taonan’ny nidiran’ny finoana katolika taty Betsileo. Nisy araka izany ny fihaonan’ireo vaomieran’ny serasera, ireo mpampahalala vaovao sy trano famokaram-boky katolika niaraka tamin’i Mgr Rabemahafaly Fulgence, arsevekan’i Fianarantsoa.
Radio Tsiry Fianar
Mankalaza ny faha 23 taonany
Fitaovana iray entin’ny fiangonana mampiely ny finoana sy manatanteraka ny asa fampandrosoana ny maha olona ny radio. Efa hatramin’ny 1995 no naminavinana azy. Mivoatra izy ary azo henoin’ny olona eran’izao tontolo izao noho ny teknolojia ampiasaina aminy.
Notokanana ny televiziona katolika voalohany eto Madagasikara
Nanangona JRR il y a 3 mois
Notokanana ny 23 janoray 2021 teo ny Radio Télévision Catholique Masôva na RTCM tao Toamasina. Io no televiziona katolika voalohany eto Madagasikara. Antsary
Après covid 19
Airtel motive ses revendeurs de puce par le jeu du meilleur revendeur
C’est à la fois un moyen de remotiver les revendeurs de puce chez Airtel mais aussi un moyen de créer des emplois. C’est ainsi que Airtel Madagasar conçoit le jeu “Mivarotra puce dia ahao fiara”.
Tandindomin-doza ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety...
Namoaka fanambarana ny Holafitry ny Mpanao Gazety izay milaza mazava fa tandindomin-doza ny fanaovan-gazety eto Madagasikara. Indro ilay fanambarana manontolo.
vokatra tsara amin’ny CEPE, tahan’ny fahazoana ‘covid-19’ midina....
Satria manano-sarotra ny fanapariahana ny gazety Lakroa (Lakroan’i Madagasikara) sy famarotana azy (any amin'ny paroasy no maro amintsika mpamaky Lakroa) dia eto amin’ny tranonkala no hamoahana ireo lahatsoratra tokony ho novakianao tao amin’ny laharana mivoaka ny alahady 20 septambra izao, laharana 4199